Adreesị IP 192.168.8.1 A na-eji ya maka mmekorita n'ime netwọkụ nkeonwe yana sistemụ dị iche. A na-ejikwa ya mgbe ịmalitere usoro nbanye iji gosipụta ngwaọrụ ọrụ ntanetị. Iji nweta 192.168.8.1 tinye Ip na adreesị mmanya nke ihe nchọgharị weebụ gị, ma ọ bụ pịa njikọ dị n'okpuru.
192.168.8.1 Nbanye Admin
Mgbe ọ bụ a onwe netwọk, ọ pụtara na ọ nwere ike tupu ekesịpde n'out oge na Oghere Usoro iji dị iche iche na netwọk. PC ndị na-enweghị njikọ netwọkụ kwesịrị ịmịnye usoro ntanetị TCP ma ọ bụ IP ọ bụla.
Ntinye maka 192.168.8.1
Esi abanye 192.168.8.1?
Adreesị IP ahụ dị oke mkpa mgbe ịchọrọ ịbanye na rawụta gị. Nzọụkwụ mbụ bụ ịnweta ụfọdụ ihe nchọgharị weebụ & fanye ndị https://192.168.8.1 njikọ na ihe nchọgharị URL igbe ugbu a pịa na 'Tinye isi.
A ọhụrụ window emepe nke na-agba gị ume ka nbanye NJ. Then ga-ahụ na-eji ndabere nbanye diplomas iji nweta ntinye na rawụta interface.
Mgbe usoro nbanye na-aga nke ọma, a ga-akpọrọ gị na homepage nke rawụta. Na Admin panel, ịnwere ike gbanwee ọtụtụ ntọala iji dabaa na netwọkụ gị & predilections.
Mgbanwe gị rawụta IP address adịghị atụ aro mgbe niile ma ọ bụrụ na ndị ọkachamara gụrụ akwụkwọ mere ya.
Echefuru IP Aha ojii ma Paswọdu Adreesị?
Na-enyocha akwụkwọ ntuziaka
Ọ bụrụ na ị na-echefu 192.168.8.1 Aha ojii na Paswọdu mgbe ị nwere ike chọọ Manual / Box maka rawụta. I nwere ike chọọ anyị rawụta ndepụta nke ndabara usernames na okwuntughe.
Ọ bụrụ na ị gbanweela aha njirimara / paswọọdụ ndabara wee chefuo ya, naanị ụzọ iji weghachite ohere bụ ịtọgharịa rawụta na nhazi ndabara, nke ga-eweghachite mgbanwe niile na ntọala ndabara. Iji nweta rawụta rawụta gị:
Were ihe dị mkpa, dị ka agịga ma ọ bụ obere akwụkwọ, ma chọọ bọtịnụ nrụpụta na azụ rawụta gị.
You'll ga-ahụ obere bọtịnụ nzuzo. Pịa ma jigide bọtịnụ ahụ na ihe dị mkpa maka gburugburu 10-15 sekọnd.
Nke a ga - eweghachite mgbanwe niile emere na nke mbụ, gụnyere aha njirimara / paswọọdụ ị gbanwere. Nwere ike banye abanye iji asambodo nbanye gị.
Ọ bụ nkịtị na ụfọdụ ogbo na-ezute dị iche iche nsogbu na gị rawụta. Ọ bụrụ n’ịnweghị ike ịgafe n’ihu nbanye, ịkwesịrị icheta ihe ụfọdụ. Nyochaa na intaneti na-adịgide adịgide ma ọ naghị agbanwe. Nhọrọ ọzọ bụ iji Iwu ozugbo mee mkpebi ọnụ ụzọ ndabara. Adreesị IP na-ezighi ezi ị nwere ike iji iji nweta njirimara onye ọrụ. I nwekwara ike ịkpọtụrụ onye na-ahụ maka ịntanetị maka enyemaka ọzọ.
'192.168.8.1bụ adreesị IP zoro ezo. Nke a bụ adreesị IP a maara nke ọma dịka ọmụmaatụ '192.168.0.1' & '198.168.0.1' ebe ọ nwere otu ọrụ ahụ dị ka nke ndị fọdụrụ 2 ka naanị ọdịiche bụ na '192.168.8.1' anaghị eji ya a kachasị nke ụlọ ọrụ router. Firms dị ka MediaLink, Huawei na-eji netwọọdụ Protocol a.
Ga-achọpụta na ndị niile na-agagharị agagharị gụnyere 2 dị iche iche nke adreesị IP. Adreesị IP sitere na netwọk dị na mpaghara a na-akpọ LAN IP address & ihe ndị ọzọ ekenye site na mọdem a na-akpọ WAN IP address. Adreesị IP '192.168.8.1' na-ejikarị iji nweta arụmọrụ nke rawụta. A na-eji adreesị IP onwe nke a maka nhazi nke ngwaọrụ netwọk.
Na mbido otu esi achọta adreesị IP nke rawụta.
Firstly, ejikọta rawụta gị na PC ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ngwá ọrụ n'ụzọ ziri ezi. Require na-achọ ịmata na imeghe rawụta admin panel ị chọrọ ijikọ rawụta n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ma ị chọghị ụdị njikọ ịntanetị maka nke a.
Yabụ, ịkwesịrị iji ya na adreesị IP nke rawụta gị. Nwere ike ịchọpụta adreesị IP nke rawụta gị site na ịga na ngwa iwu na laptọọpụ.
Zọ dị iche iji gaa 192.168.8.1 IP Adreesị
Nwedịrị ike ịgbanwe adreesị IP nke rawụta oge ọ bụla na usoro 2 ma ọ bụ site na ịmepe otu ntọala CD ọzọ site na iji ntanetị weebụ. Ọ dị mkpa maka ọtụtụ n'ime anyị ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị ahịa chọrọ ijide n'aka na enweghị nsogbu 192.168.8.l na adreesị ngwaọrụ ọ bụla. Ọ bụrụ na onye ọ bụla echezọ adreesị IP ha ọhụrụ, yabụ ya nwere ike ịtọgharịa rawụta & mgbe ahụ, a ga-amaliteghachi ihe niile na ndabara. Na mgbakwunye, onye ọ bụla nwere ike ịchọta adreesị IP ya site na ịchọ “IP m” na oghere ọchụchọ Google. O doro anya, ọ ga-alaghachi na adreesị IP gị.
N'oge a gaa na ndabara nchọgharị gị ma ọ bụ ụfọdụ ihe nchọgharị dị iche wee banye na adreesị mmanya IP https://192.168.8.1 n'ime adreesị oghere nke ihe nchọgharị ahụ. Nke a ga - eduzi gị gaa na saịtị ụfọdụ ma rite gị nbanye ịbanye na ngalaba nchịkwa rawụta.
Ebe a, mkpa ka ị dee aha njirimara na paswọọdụ gị rawụta ịbanye gị rawụta admin panel site na nke ị nwere ike gbanwee ọtụtụ nhọrọ ndị dị otú ahụ dị ka Proxy, nchekwa nhọrọ, network management, WLAN ntọala, rawụta software & ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị na-echetaghị aha njirimara & Paswọdu Router ihe ị ga-eme?
Ọtụtụ mmadụ agaghị echetaghachi aha njirimara na paswọọdụ ha. Ya mere enwere nkọwa maka ndị mebirila onwe ha rawụta aha njirimara & paswọọdụ.
Enwere ike ịnwe ikpe nke ị na-echetaghị aha njirimara & passkeys. N'ọnọdụ dị otú a, ị ga-achụ nta ya na rawụta si ika ọnụ na rawụta usoro nọmba & nbanye address.
Otu okwu ọzọ nwere ike ịbụ na ị gaghị echeta akara aka gị. Ya mere, ịkwesịrị ịtọgharịa ntọala rawụta ya na igodo ntọala nzuzo na rawụta.
Ọzọ ikpe yiri ka na ị na-agbanwebeghị gị rawụta nbanye nzere maka na i nwere ike ịchọ gị nbanye ndabere nke rawụta NJ na net.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị maara nke nkọwa nbanye nke rawụta, ị nwere ike ide na NJ router na ibe weebụ & mgbe ị dị maka onye na-ahụ maka ntanetị ntanetị.
May nwedịrị ike ịtọgharịa rawụta site na ebe nrụọrụ weebụ na-amalite ntọala.
Na njedebe, ị kọwaa ọtụtụ isi banyere 192.168.8.1 Adreesị Ntanetị .ntanetị. Enwere otutu ozi na ndị na-eme njem, modem wireless, adreesị IP, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ enyerela na mpempe akwụkwọ a. Adreesị IP a ga - enyere gị aka ịhazi netwọk brọdbandị n'ụlọ na - enweghị ọtụtụ nsogbu. Olile anya na nke a baara gị uru iji nweta netwọkụ rawụta gị & ọ mụbara ozi gị na adreesị IP.